Muuri News Network » Dowladda Jarmalka oo 32 Milyan Euro ugu Deeqday Dowlada Farmaajo…
Dowladda Jarmalka oo 32 Milyan Euro ugu Deeqday Dowlada Farmaajo…
Lacagtan ayaa Dowladda Soomaaliya loo soo marsiinayaa Bankiga Adduunka, gaar ahaan qeybta Jarmalka oo lagu magacaabo Multiple Partner Fund (MPF), taasi oo gacan ka geysanaysa xoojinta kartida degaanka iyo kartida hirgelinta si loo hagaajiyo helitaanka kaabayaasha aasaasiga ah ee Soomaaliya.
Madaxa Iskaashiga horumarinta Maalgashiyada iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Jarmalka Marius Rau ayaa sheegay ayaa sidoo kale lacagtan in loogu tala galay koritaanka magaalooyinka, horumarinta xaaladaha nololeed ee muwaadiniinta Soomaalida iyo arrimo kale.
Bangiga Adduunka ee doorka ka ah Soomaaliya wuxuu ku saabsan yahay in la shaqeeyo iyo iyada oo loo marayo xukuumadda iyo dhisidda awoodda masuuliyiinta si ay u xoojiyaan dib-u-habeynta iyo horumarka.” Ayuu yiri Marius.
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya C/raxmaan Ducaalle Beyle oo arrintan si kooban uga hadlay ayaa sheegay Dowladda Soomaaliya in ay u mahadcelineyso Jarmalka oo markale qaaday talaabo wanaagsan oo horumar u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Sanduuqa dhaqaalaha ee Dowladda Jarmalka (MPF) oo lacagtan loo soo marsiiyay Dowladda Soomaaliya ayaa taageero ka hela Midowga Yurub (EU), Hay’adda Maraykanka ee Horumarinta Caalamiga ah (USAID), Bangiga Adduunka iyo Sanduuqa Nabadgalyada (SPF).